ကျွန်မ၏သား နှင့် ဂဏန်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မ၏သား နှင့် ဂဏန်းများ
ကျွန်မ၏သား နှင့် ဂဏန်းများ
Posted by hmee on Jun 28, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 35 comments
ကျွန်မ ဘွဲ့ရတော့ အသက် ၂၅နှစ်။ ၇တန်းမှာ ပညာသင်နေစဉ် ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်လို့ ကျောင်းနားခဲ့ ရသည်လည်း တကြောင်း။ ၁၀တန်း အောင်၍ တက္ကသိုလ်တက်ပြီး သကာလ ပထမနှစ်အပြီး ဒုတိယနှစ်အတက် ကျောင်းဖွင့်စတွင် အရေးအခင်းထပ်ဖြစ်ကာ ထပ်၍ နားရပြန်လေသည်။ သည်လိုနဲ့ ကျောင်းဖွင့်လျှင် သွား၍ တက်ပြီး ကျောင်းပိတ်ပြီ ဆိုလျှင် ထပ်နား သည်လို တက်လိုက် နားလိုက်နှင့် ကျွန်မ ဘွဲ့ရတော့ အသက် အစိတ် ရှိလေပြီ။ ရသည့်ဘွဲ့သည် သချာင်္ဘွဲ့ဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်တွင် သချာင်္ တစ်ဘာသာ။ ဒုတိယနှစ် နှစ်ဘာသာ၊ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် လေးဘာသာ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မသည် ဂဏန်းများနှင့် မစိမ်းလှဟု ဆိုရပေမည်။ ရင်းနှီးသည်ဟုတော့ မဆိုလိုပါ။
ဘွဲ့ရသည့်အခါ ရွေးသောအလုပ်သည် ဈေးသည်။ အထည်မျိုးစုံကို နိစ္စဓူဝ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ငွေပေး ငွေယူေ၇တွက်သည့် အခါတွင်လည်း ဂဏန်းများပါလေသည်။ ပိတ်စ ကိုက်ထိုးများ ဖြတ်၍ ရောင်းသော အခါတွင်လည်း ဂဏန်းများမပါမဖြစ် တွက်ရချက်ရပြန်ပါသည်။ တကိုက် ၁၀၀၀ တန်သော ပိတ်စကို သုံးတောင့်ထွှာ ၀ယ်သောအခါ တကိုက်ကို ၁၀၀၀၊ တတောင်သည် ၅၀၀၊ တထွှာသည် ၁၂၅၊ စုစုပေါင်း ၁၇၅၀ ကျသင့်ပေသည်။ သည်လို သည်လို တွက်ရသည်မို့ ဂဏန်းများနှင့် လက်ပွန်းတတီး နေရပြန်လေသည်။ အပေါင်းအနှုတ် အမြောက်အစား မပါမဖြစ်၊ တခါတလေ အလီလေးများဆိုကာ မြှောက်ရပြန် စားရပြန်လေသည်။ သို့ပေမဲ့ အလုပ်အတွက်သာ ပတ်သက်၍ ပြီးသွားလျှင် ပြီးစေသဘောဖြင့် ကျွန်မသည် ဂဏန်းများကို အသုံးချရုံသာ သုံး၍ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ရိုး အမှန်ပင်။ ဂဏန်းအကြောင်းများ တခါမှပင် စိတ်ဝင်တစား မတွေးမိခဲ့ပေ။ ဤ ကဲ့သို့ စိတ်ထားရှိခဲ့သော အမျိုးသမီးတယောက်၏ ရင်နှစ်သည်းချာ သားလှလေးသည် မိခင်၏ ခြေရာကိုမနင်း မိခင်နှင့် လားလားမျှမတူသည်ကို များမကြာမီက ပို၍ ပို၍ သိခဲ့ရ၍ ကျွန်မ အလွန်ပင် အံ့သြော် ခဲ့ရသည်။
သားအသက် ၂နှစ်ကျော်ကျော် ကျွန်မနှင့် နှစ်ယောက်တည်း ရှိစဉ် အချိန်ကတည်းက သားသည် ဂဏန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသူမှန်း စ၍ သတိပြုမိသည်။ သတိထားမိရုံအပြင်တော့ သိပ်မပိုပါ။ ၁မှ ၂၀ထိကို ကျွန်မကို သင်ခိုင်းပြီး ကျန်သော ဂဏန်း ၁၀၀အထိကို သူ့စိတ်ကူးနှင့်သူ တိုးကာ သင်သွားလေသည်။ သား ဥာဏ်ကောင်းတယ်ဟု ကိုယ့်ငါးချဉ်လေး ချဉ်မိရုံသာ။ ဂျုး ကားသမားကပင် ကျွန်မတို့ သားအမိကို လာကြိုတိုင်း လမ်းတလျှောက်သား တတွတ်တွတ် ရွတ်လာသည်ကို ကြားပြီး ကျောင်းနေပြီလားဟုမေးသည်။ မနေသေးဘူး သူ့ဘာသာ 1 to 100 ကို ဆိုတတ်တာ ဆိုတော့ ဥာဏ်ကောင်းတယ်ဟု တခုတ်တရ ချီးမွမ်းတော့ ကျွန်မ ဂုဏ်ယူမိသေးသည်။ သို့ပေမဲ့ သားသည် တခြား အရာများထက် ဂဏန်းများကို ပိုစိတ်ဝင်စားသည် ဆိုတာကိုတော့ဖြင့်ဂရုမပြုမိသေးပေ။
ရန်ကုန်ပြန်ေ၇ာက်သောအခါ သားအသက် ၃နှစ်ခွဲ။ ပြက္ခဒိန်တွေကို စသိပြီမို့ သူ သိပ်စိတ်ဝင်စားသည်။ လကုန်တိုင်း လကုန်တိုင်း အခန်းတိုင်းက ပြက္ခဒိန်စာရွက်တွေကို သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပြောင်းလေသည်။ တခြား မည်သူမှ မပြောင်းရပေ။ ပြောင်းထားလျှင်လည်း ပြန်ပြောင်းပေးရသည်။ ပြီးမှ သူကိုယ်တိုင် ပြန်ပြောင်းလေသည်။ သူ့ ၀ါသနာပဲဟု သဘောထားကာ မည်သူမှ မပြောင်းတော့ပါ သူသာ ၀တ္တရားမပျက် လိုက်လံပြောင်းလေသည်။ ပြောင်းသည့် ပြက္ခဒိန်တိုင်းကို သေချာ စုန်ချည် ဆန်ချည် ကြည့်သည် ဘာတွေကို မှတ်နေသည်တော့ မသိ။ နောက် အလုပ်တခုက အချိန်အားတိုင်း စာအုပ် အလွတ်တွင် ပြက္ခဒိန်များကို မပျင်းမရိကူးသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ အချိန်အားတိုင်း တကုပ်ကုပ် ကူးလေသည်။ ကြာတော့ သူ တနှစ်စာ ပြက္ခဒိန်ကို အလွတ်ရပေပြီ။တအိမ်လုံးရှိ လူအားလုံး၏ မွေးနေ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာ ကျရောက်မည်ကို သူတပ်အပ် ပြောနိုင်သည်။ အခါကြီး ရက်ကြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေ ဘယ်နေ့ ကျမယ် သူသိသည်။
( ဘောင်ဘောင်….. ၁၉ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့က အပြာထဲမှာ မရှိဘူး။ အနီထဲ ရောက်နေတယ်)
သူက ပိတ်ရက်တွေကို အနီနဲ့ မှတ်ထားပြီး ရုံးဖွင့်ရက်တွေကို အပြာဟု မှတ်ထားသည်။ အာဇာနည်နေ့သည် စနေနေ့ ကျ၍ အနီထဲမှာ အနီထပ်ကျသောကြောင့် သူနားမလည်၍ မေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွားဖြစ်သူသည် သားသိချင်၍ မေးသော မေးခွန်း အားလုံးကို ဂရုတစိုက် နားထောင်၍ သားနားလည်အောင် သေသေချာချာ ဖြေတတ်သည်။ တခါတလေ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မေးသော မေးခွန်းကိုပင် ယုတ္တိရှိရှိဖြေပေးတတ်သေးသည်။ သေချာသည်က ကျွန်မဆိုလျှင်မဖြေတတ်၍ အော်မိမှာပင်။
( လွန်းရေ…ဒီနေ့ ဘယ်နှစ်ရက်လဲ)
( ၂၃ရက် ဗုဒ္ဓဟူး ကြီးနွဲ့ )
သည်နေ့ ဘာနေ့ ဘယ်နှစ်ရက်ဆိုတာကို သိချငိ၍ သား ကြီးဒေါ်က သားကိုမေးလေသည်။
( အမကလည်း ကလေးကို မေးနေတယ် )
( အမလေး ကိုယ့်ဘာသာ ကြည့်မှ မမြင်မကန်းနဲ့ လွဲ နေဦးမယ် သူ့ မေး မလွဲဘူး )
ကျွန်မက သူတို့ တူအရီးကြား ၀င်ပြောတော့ သား ကြီးဒေါ်က သူ့တူကို စိတ်ချသည့်ပုံ။
သားသည် ဘယ့်အတွက်ကြောင့်မှန်းမသိ ဂဏန်းတွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ ၊ နာရီတွေကို အတော် စိတ်ဝင်စားသည်။
သားအဖေသည် လည်း သားကို လက်ဆောင်ပေးတိုင်း ပြက္ခဒိန် ၊ နာရီ စသည့် သား စိတ်ဝင်စားသည်များကိုသာ ပေးတတ်လေသည်။ သားသည် ပြက္ခဒိန်တွေကို လွန်လွန်ကျုးကျုး စွဲလန်းလွန်းသည်ဟု ကျွန်မ ထင်မိသည်။ ပြက္ခဒိန်တခု လက်ဆောင်ရလျှင် အိပ်ရာထဲအထိ ယူတတ်သည်။ နောက် စာအုပ်တွင် ကူးရေးပေမည်။ သူ့ ၀ါသနာသည် တမျိုးပဲ ဟုသာ သဘောထား၍ ကြည့်နေရသည်။
သည်လိုနှင့် သားသည် သူငယ်တန်း တက်ပေပြီ။ တခြား ဘာသာများထက် သင်္ချာကို ပိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ဒါပေမဲ့ စာမေးပွဲတိုင်း အဲ့သည့် ဘာသာ ကသာ အမှတ်လျှော့တတ်သည်ကိုတော့ ပြောစရာရှိပေသည်။ သူသိပ်ကြိုက် သိပ် သဘောကျသည်မို့ ပေါ့လျှော့ သလား မပြောတတ်တော့ပါ။
သည်နှစ်တော့ သားသည် ပထမတန်း တက်လေပြီ။ ကျောင်းတက်စကတည်းက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ကျောင်းကို သွားသည်။ ပထမရက်များတွင် ဘာသံမှ မကြားရသော်လည်း နောက်နေ့များတွင် သူ အသံထွက်လာပေပြီ။
( မေမေရေ…..သချာင်္ကလည်း သူငယ်တန်းစာတွေပဲ သင်နေတယ်)
စိတ်မကျေနပ်သော အမူအရာဖြင့် ဆိုလေသည်။
( သားတို့ ကျောင်းပိတ်ထားတာ ကြာတော့ စာတွေ မေ့မှာ စိုးလို့ မှတ်မိအောင် ပြန်သင်တာ နေမှာပါသားရဲ့)
ကျွန်မ အဖြေကို ကျေနပ်သည် ထင်ပါရဲ့ ဘာမှတော့ ထပ်မပြောတော့ပေ။
( မေမေရေ…ဒီနေ့ အလီတွေ သင်တယ် )
ကျောင်းကားပေါ်က ဆင်းဆင်းခြင်း ခြံဝကတည်းက အော်လာလေသည်။ မျက်နှာကြီးလည်း ပြုံးလို့။ သူ့အတွက် အသစ်အဆန်းမို့ ပျော်နေပေသည်။
လွယ်အိတ်ကိုချ။ အ၀တ်အစားမလဲပဲ စာအုပ် အလွတ်ထဲ နှစ်အလီကို ကူးရေးပေပြီ။ နှစ်ခေါက်လောက်ရေးပြီးမှ အ၀တ်လဲကာ မုန့်စားတော့သည်။ ညနေ ကျုရှင်သွားရာ လမ်းတလျှောက် တလမ်းလုံး ဆိုလေသည်။ သားသည် အဲ့သည်လို ဂဏန်းများကို စိတ်ဝင်စားသည်။
( ပါပါ …အလီကလေ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ )
ဖခင်ဖြစ်သူ ရုံးက ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း သူ သိလိုသည်ကို သူ့စိတ်ထဲ မရှင်းလင်းသည်ကို စတင်၍ မေးပြီ။ တအိမ်လုံးလည်း နှစ်အလီ ဆိုသံ နားငြီး ပြီးလေပြီ။ ၃နှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေးပင် တခွန်း နှစ်ခွန်းစ လိုက်၍ ဆိုနိုင်နေလေပြီ။
( အလီဆိုတာ သားရဲ့ ပေါင်းတာပဲ ကွ၊ နှစ်တလီဆိုတာ နှစ်ကို တကြိမ်ပေါင်းတာ ။ နှစ်နှစ်လီဆိုတော့ နှစ်ကို နှစ်ကြိမ်ပေါင်းကွာ။ နှစ်သုံးလီဆိုတော့……..)
( သုံးကြိမ် ပေါင်းတာပေါ့….ဟုတ်တယ်နော် ပါပါ )
ဖခင် ဖြစ်သူ စကား မဆုံးခင် အားတက်သရော ၀င်ပြောပြီး စာအုပ်အလွတ်တွင် စတင်၍ ပေါင်းပါလေတော့သည်။ နှစ် အလီကို အစ အဆုံးပေါင်းပြီး သဘောကျကာ သုံးအလီကို သူ့ဘာသာ ရေးပါတော့သည်။ နောက်…..လေးအလီ။ သည်နေ့ အတွက် ဒါတော့ လွန်ပြီဟု ထင်သောကြောင့် ကျွန်မ တားမှ ရပ်လေသည်။
( ကလေးက ငယ်သေးတယ် ဦးနှောက်တွေကို သိပ် အသုံးပြုလွန်းရင် ကြီးလာမှ မိဘ ငိုနေရမယ် )
အလီကို လွန်လွန်ကျုးကျုး စိတ်ဝင်စား လာသောအခါ သားအဖွားက ဆူလေပြီ။
( ကလေးကို ဒီလောက်ကြီး မသင်နဲ့)
( သမီး မသင်ဘူး။ ကျောင်းက သင်တာ။ သူ စာပြန်တာကို နားထောင်ပေးတာ )
( ကျောင်းက သင်ပြီ။ တစ်တန်းကလေးကို အလီတွေ ဒီလောက် သင်ပြီ )
အလီ ဆိုနေသော သားကို ကြည့်၍ အဖွား အံ့သြသွားသည်။ ကျွန်မ ခေါင်းငြိမ့် ပြသော အခါမှ အဖွားသည် အံ့သြစကားဆိုသည်။
( ၄နှစ်ခွဲတို့ ၅နှစ်မပြည့်သေးပဲ ကျောင်းအပ်တဲ့ ကလေးတွေဆို ဘယ့်နှယ့်လိုလုပ် စာလိုက်နိုင်ပါ့မလဲ)
( ခေတ်က ပညာခေတ် ဖြစ်နေပြီမို့ လိုက်မှီ သလောက်တော့ လိုက်ရမှာပဲလေ။ သူ့အကြောင်းနဲ့ သူပေါ့)
အဖွားသည် ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပါ။
( မေမေ ကျုရှင်က သူငယ်ချင်းကလေ အလီဆိုတာ ကြာလှပြီ အခုထိမရသေးဘူး )
သားက အံ့သြသော ပုံစံဖြင့် ပြောပြနေ၍ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စား သွားသည်။
( ဘာ … အလီလည်း သားရဲ့ )
( ငါးအလီလေ မေမေရဲ့ ဒီလောက် အလွယ်လေးကို နာရီနဲ့ အတူတူပဲလေ ငါးခုဆီ တိုးသွားရမှာ ခြောက်လည်းရောက်ရော သုံးဆယ်လည်းဖြစ်ရော )
ရီကျဲကျဲဖြင့် ပြောနေသော သားကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ။ သူစိတ်ဝင်စားသော အလီနှင့် သူသဘောကျသော နာရီကို သူ့ ဘာသာ တွဲပြစ်ပြီး တွက်ပြတော့ အံ့သြမိတာ အမှန်။
သူပြောချင်တာပြောပြီး ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းက ရှစ်အလီ သင်လိုက်သောကြောင့် သူ့ဘာသာ ကိုးအလီ ရေးလေပြီ။ သူ့ ၀ါသနာမို့ ဘာမှ ပြောမနေတော့ပါ။ စာကို စိတ်ဝင်တစားရှိသည်ကို ကပင် ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းနေပြီ မဟုတ်လား။ သား တွက်နေသည်ကိုသာ အနားကနေ ခပ်ဆိတ်ဆိတ် ထိုင်ကြည့်နေမိသည်။
( မေမေ …..မေမေ….ကိုး အလီက လွယ်လိုက်တာ )
ကျွန်မ ထပ်၍ အံ့သြရပြန်လေပြီ။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆယ်အလီနှင့် တစ်ဆယ့်တစ် အလီသာ သိပ်လွယ်သည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ လွယ်တဲ့ အထဲ ကိုး အလီ မပါတာတော့ သေချာသလောက်ပင်။
ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက သချာ် သင်သော ဆရာသည် အလီတွေကို ကျက်ခိုင်းသောအခါ နှစ်တစ်လီမှ၊ နှစ် တစ်ဆယ့်နှစ်အလီထိ အစဉ်လိုက်ဆိုရသည်။ ပြီးလျှင် ပြောင်းပြန် ပြန်ဆိုရသည်။ နောက် ကြားပေါက် ဖောက်မေးပြန်သည်မို့ အလီကို အတော်လေးကို ကျက်ခဲ့ရသည်။ ပြီးတော့မှ အစားနှင့် အမြှောက်ကို သင်ခဲ့သည်။ အဲ့ သည်တုန်းက အလီ ကျက်ခဲ့ရစဉ်အချိန်က ကိုး အလီကို လွယ်သည်ဟု ကျွန်မ မထင်ခဲ့တာကို ကျွန်မ ခပ်ရေးရေး မှတ်မိနေသည်။ သားသည် ဘာ့ကြောင့် လွယ်သည်ဟု ထင်သနည်း။
( ဘာလို့ လွယ်တာလဲ သားရဲ့ )
( သည်မှာလေ မေမေရဲ့…ရှေ့ ဂဏန်းကို တစ်တိုးပြီး နောက် ဂဏန်းကို တစ်လျှော့လေ )
သား ပြောပြမှ ကျွန်မ သိလေသည်။ ၉x၁=၉ ပြီးတော့ ၉x၂=၁၈ မှာ ရှေ့က ၁ဖြစ်လာပြီး နောက်ဂဏန်းက ၈ ဖြစ်ပေသည်။ ၉x၃=၂၇မှာ ရှေ့ဂဏန်းက ၁တိုးပြီး ၂ဖြစ်လာက နောက်ဂဏန်း ၁လျှော့ပြီး ၇ ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်မ ကိုးအလီကို အကြိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာ အသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ ဒါပေသည့် သားပြောသည်ကို ကျွန်မ တခါမှ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မတွေးမိဘူးပေ။ ကျွန်မသည် သားလောက် ဂဏန်းများကို စိတ်မ၀င်စားခဲ့သည်မှာ အသေအချာပင်။
(…ဟာ…မေမေ…သူတို့ အားလုံးကို ပေါင်းကြည့် ကိုးပဲပြန်ရတယ် )
သူပြောသလို ကျွန်မ ပေါင်းကြည့်မိပြန်သည်။
၉x၁=၉ ပေါင်း ၉
၉x၂=၁၈ ပေါင်း ၉
၉x၃=၂၇ ပေါင်း ၉
အဲ….ဟုတ်သား ..။ အမေထက် သား တလ ကြီးလေပြီ။ အသက် အစိတ်တွင် သချာင်္ဖြင့် ဘွဲ့ယူခဲ့သော အမျိုးသမီးကြီး။ ဘွဲ့ရပြီး သည်မှာ ၁၅နှစ်တိတိ် ကြာလေပြီ။ သချာ်နှင့်ပင် ပေါင်းနှုတ်မြောက်စား လုပ်ကိုင်ကာလည်း အသက်မွေးခဲ့ သည်မှာလည်း နှစ်ကြာလေပြီ။ အသက် ၇နှစ်ပင် မပြည့်သေးသော ကလေးလောက်ပင် မသိခဲ့ပါလား။ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါလား။
သားကဲ့သို့ ဂဏန်းများကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်မျှ ရှိသနည်း။ ကျွန်မကဲ့သို့ စိတ်မ၀င်စား မေ့မေ့လျှော့လျှော့ ကျော်သွားခဲ့သူ မည်မျှ ရှိမည်နည်း။ ကျွန်မ သိချင်လှပေသည်။
ကဲ…..စာဖတ်သူတွေကော မည်သည့် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ကြပါသနည်း။
၉လီမှာ အရှေ့ကိုတစ်တိုးပြီး အနောက်ကို တစ်လျော့လိုက်တာ
အခုချိန်ထိ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိ
ဟုတ်​တယ်​ ​လေး​ပေါက်​ တခါတ​လေ ကိုယ်​အမှုမဲ့ အမှတ်​မဲ့ ​လေး​တွေကို သူက ​ထောက်​ပြရင်​ အံ့သြမိတယ်​။ စာဖတ်​လည်း ဝါသနာပါတယ်​။ စာဖတ်​ရင်​ဖတ်​ မဖတ်​ရင်း ​ရေး​နေတာပဲ။
အသံလေး ပြန်မြင်ရတာ ဝမ်းသာလှတယ်။ :-)))
သားလေး က ပထမတန်း ကိုတောင် တက်ပြီလား။
အချိန်တွေ များ မြန်လိုက်တာ။
ကလေး က သချာင်္ကို စိတ်ဝင်စားတာ အတော် ဟန်ကျပါတယ်။
သူပြောတဲ့ “…ရှေ့ ဂဏန်းကို တစ်တိုးပြီး နောက် ဂဏန်းကို တစ်လျှော့လေ” ဆိုတာ တော်ရုံ သတိမထားမိတာ လေ။
အတော် ဉာဏ်ပြေးတဲ့ ကလေးဘဲ။
သူ့အကြောင်းလေး ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးဘဲ။
မကြာမကြာ ကလေးတွေ အကြောင်းမျှပါ မှီ ရယ်။ :-))
တကယ်တော့ အဲဒီလို ကလေးမျိုး က ပါရမီ ကို ပါလာတယ် ခေါ်ရမလားဘဲ မှီရဲ့။
အာရှ ကလေး တွေက သချာင်္ချွန်တာတော့ အမှန်ဘဲ။
အိန္ဒိယမှာ ကလေးတစ်ချို့ (၁ယောက် တောင်မက) ၅နှစ် လောက် နဲ့ ကို ဖြေနိုင်ခဲ့ပြီ။
အမှတ်နဲ တာ ကတော့ ကလေး ဖြေ တဲ့ အဖြေ က မှန်လဲ ဆရာမ က တွက်နည်းမှားတယ် ဆိုပြီး အမှတ်မပေး တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး တွေ အဲဒီမှာ ရှိနေတာ ကော။
မှီ ရဲ့ အစ်မ ကတော့ ဂဏန်းကြိုက်တဲ့ ၊ စိတ်ဝင်စား တဲ့ အဖွဲ့ ထဲပါတယ် ဆိုပါစို့။
စာမေးပွဲ ဖြေ ရတဲ့ ကာလ ဘာသာတွေထဲ သချာင်္ကို ဘယ်တော့မှ မကြောက်ဘူး။
ဆရာမ တွက် နည်းလို မဟုတ်ဘဲ ကွန့်ပြီး လျှောက်တွက်တတ် ပြီး အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့တာလဲ ရှိတယ်။
ကျက်စာတွေ မှာတော့ အမြဲအားနည်းတယ်။
ကိုယ့် ကလေး ကတော့ Science ကို အတော်လေးအားသန် နေတာ တွေ့တယ်။
သူဖတ်တတ်တဲ့ သတ္တဝါ တွေ ရဲ့ ဗီဇ တွေ အကြောင်း၊ အာကာသ ထဲ က အကြောင်း တွေ က ကိုယ့်အတွက် အဆန်းတွေပေါ့။
သချာင်္ကို တော့ ပျင်းစရာ လို့ ပြောနေလို့ ချော့တစ်ခါ ခြောက်တလှည့် စိတ်ဝင်စား အောင် လုပ်နေရတယ်။
သချာင်္က မယူမနေ အဓိက ဘာသာ မို့ လဲ တစ်ကြောင်း၊ Science မှာလဲ အတွက်အချက် ဖော်မြူလာ တွေ လိုတာ တစ်ကြောင်း စိတ်ကို မဝင်မစား မဖြစ် ဝင်စား ရမှာ။ :-))
သား​က သင်္ချာကို အ​တော်​​လေးကို အားသန်​တယ်​။ ​နောက်​ သူ​လေ သိပ်​​တွေးတယ်​။ စာလည်းဖတ်​တယ်​။ အင်္ဂလိပ်​စာ စာလုံး​လေး​တွေလည်း ၁တန်းနဲ့မလိုက်​ ​ဝေါဟာရ ကြွယ်​တယ်​။ သူ့ အဖွားနဲ့ စာလုံးဆက်​တိုင်းကစားရင်​ သူက စာလုံး အဆန်း​တွေ ဆက်​တတ်​တယ်​။ အဖွားက မကြားဘူးဖူးဆို အဘိဓာန်​မှာ ရှာပြ​ပေးတယ်​။ အဓိက က သူအားရင်​ စာအုပ်​​လေး​တွေ ဖတ်​​နေတယ်​။ ရုပ်​ရှင်​လာလို့ ဇာတ်​လမ်းနာမည်​ မသိရင်​ အ​ကြွေးမထားပဲ အဘိဓာန်​လှန်​ကြည့်​တတ်​တဲ့ ဥာဉ်​​လေး အ​တော်​​ကောင်းတယ်​။ ကျွန်​မနဲ့ စာလုံးဆက်​ ကစားရင်​ သူက ​မေ​မေ ​နောက်​တခါ စာလုံး သုံးလုံးတွဲ​လေး​တွေ ​တွေ့ရင်​​ရေးမှတ်​​ပေးပါတဲ့ ဘာလို့လဲ သားရဲ့ ဆို​တော့ ၃လုံးတွဲ​လေး​တွေက အလိုအပ်​ဆုံးတဲ့ အရီး​ရေ။ အဲ့လို စပ်​စပ်​စုစု ကို သူသိတာ။ ၁တန်းက​လေးက အဘိဓာန်​ကြည့်​တတ်​။ စာလုံးဆက်​ ကစားတတ်​လို့ အိမ်​ကို အလည်​လာလို့ ​တွေ့တဲ့ သူတိုင်း အံ့သြတယ်​။ သူ့ဝါသနာနဲ့သူပါပဲ။ သမီး​လေးက​တော့ သားနဲ့ မတူဘူး။ သူက စာမှာ သိပ်​အားမသန်​ဘူး နှစ်​​ယောက်​သား ပုံစံ သိပ်​ကွာတယ်​။
အ​တွေး​လေး​တွေရတိုင်း စာတို​လေး​တွေ​ကောက်​​ရေးထား​ပေမဲ့ ပြီးဆုံး​​အောင်​ တခါမှ ဆက်​မ​ရေးနိုင်​တဲ့ စာကိုယ်​ဝန်​​တွေ အများကြီး အရီး​ရေ။ ဝီရိယ နည်းတယ်​ ဆိုရမှာ။ ဒီပို့စ်​​လေးက​တော့ အာရုံထဲ​ရောက်​တုံး တထိုင်​တည်း​ရေး တထိုင်​တည်းရိုက်​ပြီးတင်​လို့ အထ​မြောက်​သွားတာ။ ​
ဒီ အရွယ်မှာ ဒီလိုစူးစမ်းနိုင်ပြီး တွေးနိုင်တာ အတော်တော်တယ် ခေါ်ရမယ်။
အလီကို ကျက်ဖို့ သင်နေကြတဲ့ ပညာရေး အလယ်မှာလေ။
ကိုးအလီ ရဲ့ ရလာဒ်က ဂဏန်းတွေ ပေါင်းတာလည်း ကိုးပဲ ရတယ်။
ဇီ​ရေ အ​တော်​ကို စူးစမ်းပြီး​တွေးတာ။ သူ့ ဘာသာသူ ​တွေးပြီး​မေးတာ​တွေကို တခါတ​လေ အမ မ​ဖြေနိုင်​ဘူး။ ကိုယ့်​ကကိုယ်​ ညံ​နေတာ​နေမှာ။
၉နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့အဖြေ မှန်သမျှပြန်ပေါင်းရင်၉ဘဲရတယ်…၉X၁၅=၁၃၅…၁+၃+၅=၉…..၉နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂဏန်းတွေလဲဒီအတိုင်းဘဲ ပြန်ပေါင်းရင်နောက်ဆုံး၉ဘဲရတယ် ၉x၁၂=၁၀၈….၂၅၆၀x၁၀၈=၂၉၁၀၆၀…၂+၉+၁+၀+၆+၀=၁၈…၁နဲ့၈နဲ့ပြန်ပေါင်း၉ဘဲရတယ် ၉ဂဏန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ……
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးတွေအလီသင်ရင်မလိုအပ်ဘဲအများကြီးသင်ကြတယ် အလီကို12အထိဆိုခိုင်းတယ် ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက24အလီထိဆိုကြရသေးတယ်..
တကယ်လိုအပ်တာက9အလီထိဘဲလိုတာ 1အလီကို9ထိ 2အလီကို2×2ကနေစဆိုလိုရတယ် 2×1က1×2
ဆိုပြီးလို2×2ကနေစဆိုလို့ရတယ် ဒီအတိုင်းဘဲ 3အလီကို3×3ကနေစဆိုလို့ရတယ်9အလီကျတော့9×9
တကြိမ်ဘဲဆိုစရာလိုတော့တယ်…အဲဒါ တရုတ်ပြည်က ကလေးတွေ သင်တဲ့နည်းဘဲ..အပိုတွေမသင်တဲ့သဘောပေါ့…
သူတို့ ​ကျောင်းက​ပေးတဲ့ ဗလာစာအုပ်​မှာ​တော့ အလီကို ကိုရင်​​မောင်​ အခု​ပြောသလို ပုံ နှိပ်​ထားတယ်​။ ကိုရင်​​မောင်​ ​ပြောပြတဲ့ ကိုးဂဏန်းရဲ့ ဂုဏ်​သတိကို သားကို​ပြောပြလိုက်​မယ်​။ သူ သိရင်​ ချက်​ချင်းကို ချတွက်​မှာ​တော့ အ​သေအချာပဲ။
.မမှီ သားလေး တော်လိုက်တာ။ အမကတော့ ခုထိ သားအတွက် စိတ်မောရတုန်း။
အဆင်​​ပြေသွားမှာပါ မပြုံး​ရေ။ ​
Pythagoras လိုမဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ…
လောကကိုအလှဆင်တဲ့နေရာမှာ ပညာရှင်တိုင်း အသုံးဝင်တာမို့…
ဟုတ်​တယ်​ ဦး​ကျောက်​​ရေ ကျွန်​မက​တော့ သူ ဝါသနာပါတာကို ​မြေ​တောင်​​မြှောက်​​ပေးမယ်​။ ကိုယ်​ လိုချင်​တာကို ပုံ မသွင်းဘူးလို့ ​တွေးထားပါတယ်​။
ချဲဒိုင်ဖြစ်အောင် မြေတောင် မြှောက်ပေးပါလေ…
ဦး​ကြောင်​ ​ရေ သူသာ ဆန ရှိပါ​စေ မိဘ တာဝန်​​ကျေ​ပေးရမှာ​ပေါ့။
ကြီးလာရင် သူစိတ်ဝင်စားတဲ့လိုင်းသာ လိုက်ခွင့်ရရင် ထူးထူးချွန်ချွန်ကို ဖြစ်အုံးမှာ။
သူ့ ဘကြီးလို အင်​ဂျင်​နီယာ လုပ်​မလားဆို​တော့။ သားက ​လေယာဉ်​​မောင်းတဲ့ ပိုင်း​လော့ လုပ်​မယ်​ဆိုပဲ။ ဟုတ်​မဟုတ်​​တော့မသိဘူး။
လေထဲက နိုနို ကို မြင်ဖူးလို့ များလား။
အင်း ဒါဆို မမှီရေ… မနောလည်း သမီးလေးကို သင်ဖို့ ခုကတည်းက ပြန်လေ့လာရတော့မယ်ထင်တယ်နော်…
ဟုတ်​တယ်​ မ​နော​ရေ ပြန်​​လေ့လာထားရမှာ။ တခါတ​လေ သူတို့ ​မေးတာ ကိုယ်​ မသိရင်​​တောင်​ အလိုက်​သင့်​​လေး​နေပြီး ကွယ်​ရာကြမှ သူ​မေးတာ ပြန်​​ဖြေနိုင်​​အောင်​ ပြန်​ပြီး ကမန်းကတန်း ​လေ့လာရတယ်​။ သားက​ပြောတတ်​တယ်​ ​မေ​မေ ​မေ​မေဆိုတာ အကုန်​သိပြီး ဘာလို့ အကုန်​လုပ်​တတ်​တာလဲတဲ့။ အမှန်​​တော့ အ​မေက သူ မသိခင်​ အမြန်​ ပြန်​ပြီး အ​ဖြေရှာရတာ သူမှမသိ​တော့ အ​မေကို အထင်​​တွေကြီး​နေတာ။
သမီးလေးဆိုတော့ … အဟိ အဟိ
ဂဏန်းတွေထဲ.. ၉ ကို အကြိုက်ဆုံး..
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း… ၉ သမား..
အဲ… အန်တီမှီ့ သားတော်မောင်လောက်တော့ သင်္ချာပိုင်းမှာ မထူးချွန်လောက်….
ဒါမယ့်..အန်တီမှီ ညီမတော်လောက်တော့ တော်မယ်ထင့်…
အဲ့ ညီမ က ​တော်​တယ်​ ဆက်​ဆက်​​ရေ။ ညီအမ ၅​ယောက်​မှာ အထက်​ဆုံးပဲ။ ခု ​နေမ​ကောင်းဘူး အလုပမ်​ထွက်​ပြီး အ​မေတို့ဆီ ပြန်​ပြီးနား​နေတယ်​။
ကားနံပါတ်+ဖုန်းနံပါတ် +သမိုင်းထဲက ခုနှစ်တွေ မမှတ်မိ။အကြောင်းအရာဆို မှတ်မိတယ်။
မှီ့သားလေးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြီးပြင်းပါစေနော်။
ဟုတ်​ အမဒုံ။ ပုံမသွင်းဘူး။ သူ ဖြစ်​ချင်​တာကိုပဲ ပံ့ပိုး​ပေးမယ်​လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်​။
.ကိုးကထူးတာအမှန်ပဲ…“၉နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့အဖြေ မှန်သမျှပြန်ပေါင်းရင်၉ဘဲရတယ်” .ဆိုတာတော့သိခဲ့တယ်…“…ရှေ့ ဂဏန်းကို တစ်တိုးပြီး နောက် ဂဏန်းကို တစ်လျှော့လေ ” ဆိုတာတော့
ဦးကြီးမိုက်​ သမီး​လေးလို သားက်ို ​တော်​​စေချင်​လိုက်​တာ။ ပြီးမှသာ သားဝါသနာပါရာ လု​ခွင့်​​ပေးမှာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုးအလီကို လက်ဆယ်ချောင်းနဲ့ မှတ်ခဲ့ဘူးတာလေးတော့ သတိရသား XD
သားက ​တွေးတာ​တော့ ​တော်​​တော်​ကို ​တွေးတာ။
အားလုံးပေါင်းကိုးတော့ သိတယ်။ အလီကိုချပြသွားတာလေး မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။
ကလေးကြီးလာမယ့်…. ခေတ်လောက်ဆို… ၀ါသနာပါတာကနေ.. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်လောက်အောင် ၀င်ငွေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေလောက်မှာပါ…။
ပါရမီရှိ…။ ၀ါသနာပါ…။ ၀င်ငွေရ.. သမ္မာအာဇီဝဆို… ကောင်းလှပေါ့..။
အရင်ဆုံးနှမျောလိုက်တာလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အမေရိကားမှာဆိုဒီကလေးမျိုးကို ကျောင်းကအပြန်ပြန်လေ့လာပြီး တကယ့်ထူးချွန်ကလေးဆိုရင် သီးသန့်ဆရာနဲ့ ပညာရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတော့မှာ။ ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေလေတော့ နှမျောတသရွတ်ရုံမှတပါး
တော်လိုက်တာ ကလေးက ဒီအသက်အရွယ်နဲ့
ကိုယ်တွေတောင် ရှေ့ကတစ်တိုးနောက်က တစ်လျော့ကိူ
ကိုယ့်ကလေးတွေ အလီကျက်တုန်းက မှသတိထားမိတယ်
၉ရဲ့မြောက်လဒ် တွေပေါင်းရင် ၉ရတာ ခုမှသိတယ်